Alshabaab oo shaacisay inay Dib u qabsatay Deganada Koonfurta Mudug ee hoostaga degmada Hobyo - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Alshabaab oo shaacisay inay Dib u qabsatay Deganada Koonfurta Mudug ee hoostaga degmada Hobyo
Alshabaab ayaa shaacisay inay dib u qabsatay degaanadii ay dhowaan kala wareegeen Ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda, sidoo kalena ay la wareegtay degaano hoostaga degmada Hobyo ee Gobolka Mudug.
Warbaahinta Alshabaab ayaa sheegtay in maleeshiyada Alshabaab dib u qabsadeen degaanada Camaara, Qeycad, Bacaadweyne, Xoosh, Dhaghaye, Sabeenno gowrac iyo deegaanno kale oo hoos taga magaalada Hobyo.
Ma jirto cid xaqiijisay sheegashada Alshabaab, iyadoo bilihii ugu danbeeyay ay dagaallo culus ka socdeen degaanadaasi, waxaana ugu danbeeyay maagaalda Camaara oo dagaal qasaare xoog leh dhaliyay ka dhacay toddbaadkan.
Wararka ayaa sheegay in ciidamadii dowlada iyo kuwa Galmudug ay dib uga gurteen degaanadii ay hore uga qabsadeen Alshabaab.
Previous articleImaaraadka Carabta oo ergay u dirtay Dalka Qatar iyo xiriirkii ugu horeeyay dhex maray labada Dal
Next articleXOG: Farmaajo oo diidmo kala hor tegay Dalab uga yimid Axmed Qoorqoor (Maxaa dhex maray..?)